IMexico City Metro idlula ukuwa. Ngo-3 Meyi 2021 ngo-22: 25
ⓘ IMexico City Metro idlula ukuwa. Ngo-3 Meyi 2021 ngo-22: 25 CDT, isigaba esiphakeme kuMugqa 12 weMexico City Metro sadilika phakathi kweziteshi i-Olivos neTezon ..
ⓘ IMexico City Metro idlula ukuwa
Umugqa 12 owaziwa nangokuthi i-Golden line ulayini omusha sha wohlelo lweMetro, ukwakhiwa kwalo kwaqala ngoSepthemba 2008. Kepha kusukela ekuqaleni kwenkonzo, ibibhekene nezinkinga ngezitimela ezingxenyeni eziphakeme, okuphoqe ukwehliswa kwejubane ngenxa yezinkathazo zokuphela. Ezinyangeni eziyishumi nesikhombisa kamuva, isigaba se-Atlalilco – Tláhuac, lapho kutholakala khona iziteshi zeTezonco ne-Olivos, savalwa izinyanga ezingamashumi amabili ukulungisa amaphutha ezobuchwepheshe nezakhiwo.
Ngo-3 Meyi 2021 ngo-22: 25 CDT, esigodini saseTláhuac, isitimela esiya esiteshini saseTláhuac sasidlula emgwaqeni ophakeme phakathi kwe-Olivos neTezonco. Cishe ngamamitha angama-220 ngaphambi kokufika esiteshini sase-Olivos, isigaba sadilika lapho i-girder eyayisekela ujantshi ihluleka, okwenza izimoto ezimbili zokugcina zawa. Imfucumfucu iwele emotweni. Okungenani kushone abantu abangama-24 kwathi abanye abangu-70 balimala, kuhlanganisa nabangama-65 abasesibhedlela, abayisikhombisa babo abasesimweni esibucayi. Abashonile bahlanganisa nezingane. Ukweqa okungaphezulu kwakungamamitha ayi-5 16 ft ngenhla komgwaqo kodwa kugijima phezu kwesiqeshana esiphakathi kokhonkolo, okwaholela ekulimaleni okuncane kubashayeli emgwaqeni.
Wikipedia: IMexico City Metro idlula ukuwa